आँखाको डार्क सर्कलले हैरान हुनु भएको छ ? दन्तमन्जन लगाएर यसरी हटाउनुस् सजिलै - HelloKhabar
आँखाको डार्क सर्कलले हैरान हुनु भएको छ ? दन्तमन्जन लगाएर यसरी हटाउनुस् सजिलै
एजेन्सी । कोलगेट अर्थात दन्तमन्जन दाँत सफा गर्नको लागि बनाइएको हुन्छ । तर, पछिल्लो समयमा कोलगेट छालाको सौन्दर्यको लागि प्रयोग गरिएका उदाहरणहरु भेटिन्छन्। कोलगेट उत्पादन गर्नेहरुले भने कोलगेटको उत्पादन छालाको नभएर दाँतको पहेंलोपन, दाग आदि हटाउनको लागि उत्पादन गरिने बताउँछन्।
मुख्य समाचार January 20, 2021
मुख्य समाचार January 23, 2021
यसरी थाहा हुन्छ, सरकारले राजपत्र छाप्न गरेको मिति बदमासी (दुई प्रमाणसहित)
संसद विघटन विरुद्धको मुद्धामा अब ‘टाइम कार्ड’
ब्यानर January 20, 2021